Doorashadii Madaxweynaha ee Tuniisiya: Codsiyada '26' oo la ansaxiyay 98 - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Doorashadii Madaxweynenimo ee Tuniisiya: Codsiyada 26 ee la ansaxiyay 98 - JeuneAfrique.com
Doorashadii Madaxweynenimada ee Tuniisiya: Codsiyada 26 ee lagu ansaxiyay 98 - JeuneAfrique.com
Codsiyada 26 ee doorashadii madaxweynenimada hore ee 15 Sebtember ayaa la ansaxiyay - oo ay ku jiraan kuwa dhammaan kuwa ugu cadcad - iyo 72 waa la eryey, ka dib baaritaan horudhac ah oo ku saabsan kiisaska, ayaa Arbacadii shaaca ka qaaday hay'adda maamusha codbixinta ee Tunisiya (Isie ).
Murashaxiinta faylkooda la diiday waxay ka xaraysan karaan rafcaan laga bilaabo bisha Agoosto 15, iyo ku dhawaaqida liiska kama dambeysta ah ee musharixiinta codbixintan waxaa la shaacin doonaa Agoosto 31, ayaa lagu sheegay shir-jaraa'id, Nabil Baffoun, madaxweynaha Isie.
Faylasha la diiday waxaa kamid ah Mounir Baatour, oo isu muujiya inuu yahay daafaca xuquuqda LGBTQ, in kastoo lagu muransan yahay bulshada dhexdeeda. U tartamida qareenkan wuxuu si furan ugu andacoonayaa khaniisnimadiisa inay noqon laheyd tii ugu horeysay taariikhda dalka iyo dunida carabta.
Wareega koowaad ee doorashada madaxweynaha Tuuniisiya ayaa dhici doonta Sebtember 15, ololaha rasmiga ah ee la qaban doono inta udhaxeysa 2 iyo 13 isla bishaas. Markii hore la qorsheeyay dhammaadka sanadka, doorashadan ayaa la filayay inay ka dambayso Dhimashada Beji Caid Essebsi. Madaxweynihii ugu horeeyey ee si dimoqraadi ah loogu doorto isku filnaansho caalami ah, Caid Essebsi, sanadihii 92, wuxuu dhintey July 25. Waa gudoomiyaha baarlamaanka Mohamed Ennaceur oo hubiya kumeelgaarka.
Dalka hormuudka u ah Carabnimada 2011, Tunisiya waxay ku guuleysatay inay sii waddo sannadihii ugu dambeeyay wadada dimoqraadiyadda. Doorashada madaxweynaha, iyo doorashooyinka sharci dejinta ee loo qorsheeyay deyrta, si kastaba ha noqotee, waa tijaabooyin cusub oo loogu talagalay dimuqraadiyadan da 'yarta ah, oo weli wajahaysa dhibaatooyin waaweyn oo xagga dhaqaalaha iyo bulshada ah.
Afrique-France: casho u dhexeeya Emmanuel Macron iyo Alassane Ouattara - JeuneAfrique.com
DRC: muranka ku saabsan mushaharka shaqaalaha ee sii socda xubnaha dowladda - JeuneAfrique.com